iklabishi Chinese - Akasekho angavamile. Futhi kuyiqiniso. iklabishi Chinese Sekuyisikhathi eside isikhule eNingizimu ye-Asia isetshenziswa lapho labapheki ezihlukahlukene izitsha. Kodwa eRussia kanye namazwe angomakhelwane, esanda kutholakala futhi masinyane zeza ukunambitha izakhamuzi zendawo ezinazo. Iqiniso ukuthi ngaphambili iklabishi Chinese esekhulile eRussia kanye amazwe evela e-Asia. Ngenxa yalesi sizathu, izindleko zayo yayiphezulu, hhayi wonke umuntu ovamile ayenamandla okukwenza ukuthenga ezinjalo. Kodwa manje, lapho iklabishi Chinese zaqala ukuhluma futhi kwamanye amazwe aseYurophu, it is siqine ekudleni kwethu.
Beijing noma iklabishi?
Ekhishini uyakwazi ngokugcwele ozothatha indawo pekinka iklabishi, kodwa noma kunjalo kuba kahle futhi akusho ukukhipha esingokwemvelo iklabishi iphunga eyinqaba. ukunambitheka kwako obucayi Kuthi okusikhumbuza isaladi. Futhi mayelana izakhiwo ezuzisayo iklabishi Chinese kakade kangaka ukuthi akunakwenzeka ukuba sisisebenzise indlela odla ngayo.
Iklabishi Chinese kungenziwa kuphekwe izitsha eziningi ezahlukene, kodwa okuthandayo kakhulu kunikezwa ke in salads. Lenza kahle iningi izithako kanye nezinongo. Soy sauce isaladi iklabishi Chinese kuyinto okusikhumbuza esaseMpumalanga, kanye kwalokho ochotshoziwe basil, ukhari noma phansi coriander ulunika ukunambitha obugagu angavamile. Ngaphezu kwalokho, kungase ukukhonza njengephayona umhlobiso omuhle izitsha abandayo, amasaladi, kanye nezinye izinhlobo zokudla. IsiShayina amahlamvu iklabishi kanye iklabishi, ungakwazi marinate nosawoti.
Amasaladi iklabishi Chinese sonke isikhathi
Salad iklabishi Chinese - isidlo esihlwabusayo futhi unempilo njengoba itafula zemikhosi futhi nsuku zonke. A ezihlukahlukene omkhulu isaladi zokupheka ikuvumela ukuba ukhethe ezifanele kakhulu isikhathi isidlo. Ngakho emikhosini kungenzeka ukulungiselela isaladi ocebile iklabishi Chinese ne ukwengeza ngibhema inyama, ama-crackers, shizi imayonnaise. Futhi abantu abalandela indlela yokudla ofanele ukukhanya isaladi iklabishi Chinese utamatisi, asithena, kanye soy sauce. Labo ukudla, ahlinzekwa Meatless isaladi iklabishi Chinese, apula, amantongomane, uphayinaphu namafutha omnqumo.
Salad "uKhesari" nge iklabishi Chinese
Izithako: 800 amagremu iklabishi Chinese, 200 amagremu crackers, 300 amagremu ngabhema ubhekeni, 4 tbsp. l. imayonnaise esilinganayo amafutha, lemon-phansi, 300 amagremu of ushizi "weparmesan", usawoti.
iklabishi Chinese wageza, omile futhi ukuqaqa amaqabunga. Khona-ke uthathe yizicucu amancane, eligoqiwe amaqabunga phezu nomunye. emapheshana Sika ubhekeni kanye gazinga epanini ezomile ukwakha uqweqwe futhi kulula wagqoka ipuleti. Ukuze sauce ukuxuba imayonnaise, kalamula uwoyela ubebushelezi. Engeza iklabishi ubhekeni croutons uphinde uhlele phezu kwezitsha. Fafaza sauce fafaza ushizi vukuza.
IsiShayina iklabishi isaladi nge asithena
Izithako ngayinye bakhonze: iklabishi - 100 amagremu, utamatisi - 50 amagremu, asithena - 20 amagremu soy sauce.
amahlamvu Bahlanza iklabishi Chinese zokudonsa izandla zakhe phezu kwenhloko izingcezu ezincane wembatha bonke ubuso ipuleti flat. Utamatisi ku cubes aphakathi nendawo nendawo wembatha phakathi ulethisi. Khona-ke, ku-emaphethelweni izithombe zama-slide utamatisi oqotshiwe umkami esihle ukubeka asithena futhi uthele usoso wesoya.
IsiShayina iklabishi isaladi ngezithelo
Zokuthola libe linye: iklabishi - 80 amagremu Pineapple - 50 igremu, omunye apula encane, amafutha omnqumo, 20 amagremu of nati.
Iklabishi ukuphula izandla zakhe zibe yizicucu amancane wagqoka ipuleti. Apple ehlutshiwe, cored bese uthathe cubes ezincane. Uphayinaphu uthathe kancane esingaphansi cubes apula. Hlanganisa apula, uphayinaphu namantongomane wafaka le nesisindo iklabishi Chinese. Isizini ngamafutha omnqumo.
Salad "Span" futhi isaladi zokupheka Whip up
"Shrimp ngaphansi ijazi noboya" - isaladi bonke izikhathi
U-Elizabeth Tudor 1: Biography, inqubomgomo ezifuywayo angaphandle. Faka 1 U-Elizabeth Tudor kwezombangazwe. Ubani obusa emva 1 U-Elizabeth Tudor?
Lokufuna izinga izimpahla: imininingwane idokhumenti